Kwamagoda Beautiful ngezandla
Selokhu ezikhathini zasendulo, intombazane ephethe ezinde kwakubhekwa njengesibusiso ubuhle, futhi konke alalelwa wakhe. izinwele ogelezayo - akusiwona elula futhi enhle njalo. ukubukeka Okuningi kukhanga ngokwengeziwe uzilungise kahle ekhanda izinwele kahle isitayela kwekhanda enhle, futhi ngisho kangcono uma bebahle aluka pigtails luhlotshiswe izesekeli yesimanje. Izinhlobonhlobo kwamagoda eziningi, futhi ngamunye kubo has umlando walo kanye nezici.
Ngaphandle kweqiniso lokuthi eluka ukhonza njengomdala izinwele umhlobiso futhi kuphumela izinwele ukuze ephelele, ukweluka wakhe - futhi okuhlangenwe nakho okuthakazelisayo, okuyinto kwabesifazane abaningi isiba wokuzilibazisa ozithandayo. Qakala lokhu uhlobo izinwele akuyona, kwamagoda enhle zidonse ukunaka kwanoma abanye, futhi ngcono ukuzethemba intombazane noma owesifazane ogqoka kubo. Wonke umuntu wesifazane kufanele bakwazi plait kwamagoda, njengoba lokhu kungase kudingeke ezimweni ezithile. Uma ungafunda indlela eluka izinwele uqobo, kungaba kuhle londoloza kuyiwe ubuhle salon, futhi ngaphandle kwalokho, kuyohlale kuyiqiniso futhi enhle. Ngiseyingane, konke kulula kakhulu futhi kungadingeki ukuba bazibuze ukuthi ukuba sifake kwamagoda enhle, nje kudingeka ukuza ugogo wakhe othandekayo noma umama ukubabuza ngayo. Futhi ngemva kwemizuzu eyishumi kwakunokwenzeka ukubukisa nezintombi zabo kwekhanda elihle ukuthi kuhlobisa umnsalo amakhulu abomvu.
Ukuze ukuba nguchwepheshe kuwo wonke amasu kanye ukuqonda inqubo ukwelukwa, ukuba zikwazi lokho ukuze zifunde indlela eluka eluka abavamile kakhulu ehlanganisa imicu emithathu. Ulamula kunazo zonke izinhlobo kwamagoda iyona isiFulentshi, ngakho-ke kufanelekile cishe noma yikuphi uhlobo izinwele. Imila kalula ngokwanele eluka, futhi akuthathi isikhathi sakho esiningi.
ethandwa kakhulu kukhona namathe, njengoba "fish nomsila", "spike", "ngesiGreki Amathe", "eluka Danish", "kwamagoda Afrika", "eluka French". Kakhulu amagama sonorous futhi enhle kwamagoda, indlela sifake okungenani ezimbalwa zezinhlanzi, masizame ukuqonda.
Kunezinhlobo eziningi ezahlukene. Ngokwesibonelo, kwamagoda enhle kanjena "fish nomsila" encazelweni kubonakale nzima e ebulawa, kodwa lokho kumane nje efika kuqala. Ngaphambi musa beluka, ezimanzisa izinwele kanye nekama ke. Siqala plait eluka nge Hlukanisa izinwele ngesikhathi umqhele halves ezimbili alinganayo thwi. Khona-ke sithatha kwesokunxele Strand mncane futhi babiza yonke inhlama izinwele ohlangothini lwesokudla. I phinda okufanayo Ngakolunye uhlangothi. Yilokho sonke isimiso of ukwelukwa "fish nomsila".
kwamagoda enhle kanjena "Amathe YesiGreki", imfashini kakhulu kule sizini, futhi zivame kakhulu phakathi kwabesifazane. Kungase kufike abanikazi ezisontekile futhi iqonde. Isici esiyinhloko lolu hlobo amasu ukwelukwa kwamagoda ukuthi imicu zithathwa kuphela kusuka kolunye uhlangothi. Letha ohlangothini kwesokunxele i Strand isilinganiso izinwele futhi eluka iyingxenye ebalulekile eluka "Fishtail", ekuthumbeni sivala nhlangothi zombili. Lapho eluka yakho ifinyelela aluka yayo endlebeni okuphambene, unamathisele okuholela izinwele izikhonkwane. Hlobisa okuholela plait barrette kuhle noma ezinye amahle izinwele izesekeli.
Yini okufanele ukwenze ukuze izinwele zakho hhayi pushilis futhi curled?
Staining Ombre: ukubuyekezwa kanye namanani amasevisi
Blonde izinwele umbala - kuyindlela enhle ukubheka abaneminyaka engaphansi yabo.
Kwekhanda Perfect for Emshadweni
Indlela ukhule ube bang, ngakho-ke kungaphazamisi? Uyabakhathalela esiphongweni bese kubekwa
Maria Poroshina: Filmography, biography, empilweni yakho
Indlela yokufaka isicelo kahle ukwakheka: iseluleko esisebenzayo
Ukuhlaziya inkondlo Lermontov sika "The Prisoner." imizwa Heavy imbongi
Yentela yemali engenayo senzuzo ukwelashwa: kanjani ukuze ibuyisele le mali
Sol-Iletsk, echibi: ukubuyekezwa. Sol-Iletsk: ukuphumula, ukuvakasha
Amagama Inyanga ngesiNgisi: umbhalo, ukuhumusha, ukuzivocavoca
Quick ukufaka Joomla ithempulethi